Tsapa ao an-tokantrano
Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao ; Asa. 16:31
Ny asa misionera dia tokony hatao ao amin’ny ankohonana. Eto no tokony hanehoan’ireo izay nandray an’i Kristy izay nataon’ny fahasoavana ho azy ireo. Misy hery miasa mangina avy any ambony mifehy ny tena mpino marina ao amin’i Kristy, ary io hery miasa mangina io dia manao izay hahatsapana azy manerana ny tokan-trano ary mahasoa ho amin’ny fanaovana ho tonga lafatra ny toetran’izay rehetra ao an-trano (...)
Mila ireo hery ara-panahy rehetra nokolokoloina izay azo raisina ny fiangonana, mba hahazoan’ny rehetra, indrindra fa ny tanora indrindra amin’ny fianakavian’ny Tompo, fiarovana tsy misy ahiahy. Ny fahamarinana iainana ao an-trano dia mahatonga izany ho tsapa amin’ny asa tsy misy fitiavan-tena any ivelany. Izay mivelona ny maha kritsianina ao an-tokantrano dia ho fahazavana mamirapiratra na aiza na aiza.
Maniry ny ankizy sy ny tanora mba hirotsaka ao amin’ny andiantafiky ny Tompo Andriamanitra (...). Tsy maintsy hofanina mba hanohitra ireo fakam-panahy sy hiady ny ady tsaran’ny finoana izy ireo. Tariho ny sain’izy ireo ho eo amin’i Jesosy raha vantany vao mahatakatra ireo lesona tianao hampitaina amin’ny teny tsotra, mora raisina izy ireo. Ampianaro fifehezan-tena izy ireo. Ampianaro izy ireo mba hanomboka ny asan’ny fandresena raha mbola zaza, fa handray ny fanampiana sarobidy izay azon’i Jesosy ary tiany hatolotra izy ireo, mifandray amin’ny ezaka ombam-bavaky ny ray aman-dreny. Ampaherezo amin’ny teny fampaherezana momba ny ady tarehiny izy ireo amin’ny fanoherana fakam-panahy ka hivoaka ho mpandresy amin’ny alalan’ny fahasoavana nomena azy ireo ao amin’i Jesosy Kristy.
Ny firindran’ny faribolan’ny tokan-trano dia matetika no simbain’ny teny tsy voahevitra sy diso tafahoatra. Ho tsara manao ahoana re raha tsy nolazaina izany. Ny tsikim-pankasitrahana iray, ny teny voasedra, feno fiadanana, nolazaina tamin’ny fanahin’ny fahalemem-panahy, dia ho hery iray hampitony, hampahery, ary hitahy Maro no manala tsiny ireo teny tsy voahevitra sy ireo fihetseham-po ankamamiana amin’ny filazana hoe: “Mora tohina aho; manana toetra mirehitra aho”. Izany dia tsy hanasitrana na oviana na oviana ireo ratra vokatry ny teny tsy voahevitra sy voalanjalanja (...). Tsy maintsy maty ilay olombelona, ary ilay olom-baovao, Jesosy Kristy, no mifehy ny fanahy (...)